Late Period (ရာသီမမှန်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Late Period (ရာသီမမှန်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Late Period (ရာသီမမှန်ခြင်း)
Late Period (ရာသီမမှန်ခြင်း) ကဘာလဲ။
လစဉ်ဓမ္မတာမမှန်ခြင်းကိုခေါ်တတ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာ သုံးကြိမ်ရာသီမလာပါက ရာသီပျောက်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ရာသီပျောက်ရခြင်းအကြောင်းအများစုကတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိတာဖြစ်ပြီး တခြားအကြောင်းတွေကတော့ မျိုးပွားအင်္ဂါတွင်ပြဿနာဖြစ်ခြင်း၊ ဟော်မုန်းတွေကိုထိန်းညှိနေသော ဂလင်းများတွင်ပြဿနာဖြစ်ခြင်းတို့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာဆိုရင် ထိုအကြောင်းအရင်းကို ကုသလိုက်ပါက ရာသီပြန်မှန်စေနိုင်ပါတယ်။
Late Period (ရာသီမမှန်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
နိုင်ငံအလိုက်၊ လူမျိုးအလိုက် ဖြစ်နိုင်ချေကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စားသောက်မှုပုံစံ၊ နာတာရှည်ရောဂါတွေစတဲ့အချက်တွေကတော့ တွေးနေစရာမလိုအောင် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချေတက်စေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Late Period (ရာသီမမှန်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အဓိကလက္ခဏာကတော့ရာသီမပေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရင်းတွေပေါ်မူတည်ကာ တခြားလက္ခဏာတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ-
အထက်ပါလက္ခဏာတွေတွေ့ရမယ်၊ သိလိုသည်များရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းခန္ဓါကိုယ်ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူတာကြောင့် သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေရဖို့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Late Period (ရာသီမမှန်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရှင်သန်နေရင်းနဲ့ သာမန်အကြောင်းတွေတွေကြောင့် ရာသီမမှန်တာ၊ ပျောက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်-
အမျိုးသမီးအများစုက ဓမ္မတာတစ်ကြိမ်နဲ့တစ်ကြိမ်ကြားမှာ ၂၈ ရက်ခြားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၁ ရက်ကနေ ၃၅ ရက်အထိခြားလို့ရပါတယ်။ ထိုကွာခြားချက်တွေလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေထဲကတစ်ချက်ချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု- စိတ်ဖိစီးမှုဟာ ဟော်မုန်းတွေကိုဂယောက်ဂယက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး hypothalamus ဟုခေါ်သော ရာသီလာခြင်းကိုထိန်းချုပ်သောဦးနှောက်ပိုင်းကိုပင် ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ဖိစီးမှုဟာ သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုပြောင်းလဲစေခြင်း၊ နာမကျန်းဖြစ်စေခြင်းတို့ဖြင့်လည်း ရာသီလာခြင်းကိုထိခိုက်မှုရှိစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ရာသီလာခြင်းထိခိုက်တယ်လို့ထင်ပါက စိတ်လျှော့ချအပန်းဖြေပြီး နေထိုင်မှုပုံစံတချို့ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ခြင်းကလည်း အကူအညီဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အလေးချိန်ကျခြင်း – အစားအသောက်ပုံမှန်မဟုတ်သော အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း ရာသီပျောက်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အလေးချိန်ရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်နည်းနေခြင်းဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီး သားဥကြွေခြင်းကိုရပ်တန့်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းပြီး အလေးချိန်တိုးလာခြင်းဖြင့် ရာသီလာခြင်းကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်း – အလေးချိန်နည်းသလိုပဲ အလေးချိန်များလွန်းခြင်းဟာလည်း ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့အဝလွန်ခြင်းကြောင့် ရာသီပျောက်တာဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်က စားသောက်မှုပုံစံ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
PCOS- PCOS ဆိုတာ ခန္ဓါကိုယ်ကနေ အဖိုဟော်မုန်းများထုတ်စေသောအခြေအနေဖြစ်တယ်။ ထိုကဲ့သို့ဟော်မုန်းမညီမျှမှုကြောင့် သားဥအိမ်တွေမှာ အရည်အိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ထိုအရည်အိတ်တွေကြောင့် သားဥကြွေခြင်းမူမမှန်တာမျိုး၊ ရပ်တန့်သွားတာမျိုးဖြစ်လာပါတယ်။ PCOS ကြောင့် တခြားသောဟော်မုန်းများ၊ ဥပမာ- အင်ဆူလင် ထုတ်လုပ်မှုပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်။ PCOS ရဲ့ကုသမှုကတော့ ခံစားရတဲ့လက္ခဏာတွေကို သက်သာစေဖို့ဦးတည်ပါတယ်။ ရာသီစက်ဝန်းမှန်ဖို့ကိုတော့ သန္ဓြေတားဆေးကဲ့သို့ဆေးများညွှန်ပါလိမ့်မယ်။
သန္ဓြေတားခြင်း – သန္ဓြေတားထားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သန္ဓြေတားခြင်းကိုရပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ရာသီမမှန်တာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ သန္ဓြေတားဆေးမှာ estrogen နဲ့ progestin လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေပါပြီး ထိုဟော်မုန်းတွေကသားဥကြွေခြင်းကိုတားပါတယ်။ ထိုဆေးတွေရပ်ပြီး ရာသီပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့ ခြောက်လလောက်ကြာတတ်ပါတယ်။ တခြားသောသန္ဓြေတားနည်းတွေကလည်း ရာသီလာခြင်းရပ်တန့်စေတတ်ပါတယ်။
နာတာရှည်ရောဂါများ – ဆီးချိုသွေးချို၊ အူဆိုင်ရာရောဂါများကဲ့သို့ နာတာရှည်ရောဂါများကလည်း သင့်ရာသီစက်ဝန်းကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ပြောင်းလဲမှုဟာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲနဲ့ဆက်နွယ်နေတတ်ပြီး သေချာစောင့်ရှောက်မှုမရှိတဲ့ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဟာ ရာသီလာခြင်းကိုပုံမှမဟုတ်ဖြစ်စေတယ်။ အူဆိုင်ရာရောဂါတွေကြောင့် အူသိမ်ရောင်ရမ်းတဲ့အခါမှာလည်း ခန္ဓါကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေကိုမစုပ်ယူနိုင်တာကြောင့် ဓမ္မတာလာခြင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
စောစီးစွာသွေးဆုံးခြင်း – အမျိုးသမီးအများစုဟာ အသက် ၄၅-၅၅ ကြားလောက်မှာမှသွေးဆုံးတတ်ပါတယ်။ အသက် ၄၀ တဝိုက်မှစပြီး သွေးဆုံးလက္ခဏာတွေပြနေရင်တော့ စောစီးစွာသွေးဆုံးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ သားဥမကြွေနိုင်တော့တာကြောင့် ရာသီလာခြင်းပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲ နောက်ဆုံးရပ်တန့်သွားတတ်ပါတယ်။
သိုင်းရွိုက်ပြဿနာများ – သိုင်းရွိုက်အလုပ်ပိုလုပ်တာ၊ အလုပ်လျော့လုပ်တာကြောင့်လည်း ရာသီလာခြင်းထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုကိုထိန်းချုပ်ပေးတာကြောင့် ဟော်မုန်းပမာဏတွေလည်း ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ပြဿနာတွေဟာ ဆေးကုသလို့ရပြီး ကုသအပြီးမှာ သင့်ရာသီလာခြင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Late Period (ရာသီမမှန်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မိသားစုရာဇဝင် – တကယ်လို့ မိသားစုထဲမှာရှိတဲ့ တခြားအမျိုးသမီးမှာ ရာသီပျောက်ခြင်းကြုံဖူးတယ်ဆိုရင် သင့်မှာလည်းထိုကဲ့သို့ကြုံရနိုင်ချေများပါတယ်။
စားသောက်မှုပုံစံ – စားသောက်မှုပုံစံမမှန်တာ၊ အစားအသောက်ပျက်တာမျိုးရှိရင် ရာသီပျောက်နိုင်ချေများပါတယ်။
အားကစားသမားများ – ပြင်းထန်သော အားကစားများကြောင့်လည်း ဓမ္မတာလာခြင်းပျောက်တတ်ပါတယ်။
Late Period (ရာသီမမှန်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်ကတခြားသော မျိုးပွားအင်္ဂါပြဿနာတွေဟုတ်မဟုတ်သိရဖို့ တင်ပါးဆုံရိုးဆိုင်ရာစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရာသီတစ်ခါမှမလာဖူးသေးသူဆိုရင်တော့ တကယ်အပျိုဖော်ဝင်စပြုပြီလားသိရအောင် ရင်သားနဲ့၊ တခြားမျိုးပွားအင်္ဂါစမ်းသပ်မှုများလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ရာသီပျောက်ခြင်းဟာ ရှု့ပ်ထွေးတဲ့ဟော်မုန်းပြဿနာတွေရဲ့ လက္ခဏာလည်းဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အခြေခံပြဿနာကိုသိရဖို့ တစ်မျိုးထက်ပိုတဲ့စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေလိုပြီး အချိန်လည်းကြာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း – ဒါဟာပထမဆုံးလုပ်ရမယ့် စစ်ဆေးမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သိုင်းရွိုက်လုပ်ဆောင်ချက်စစ်ဆေးခြင်း – သွေးတွင်း TSH ဟော်မုန်းပမာဏစစ်ဆေးပြီး သိုင်းရွိုက်အလုပ်လုပ်ခြင်းကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
သားဥအိမ်စစ်ဆေးခြင်း – သွေးတွင်း FSH ဟော်မုန်းပမာဏစစ်ဆေးပြီး သားဥအိမ်များအလုပ်လုပ်ခြင်းကို ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
Prolactin ပမာဏ – prolactin ဟော်မုန်းပမာဏနည်းနေခြင်းဟာ pituitary ဂလင်းအကျိတ်ရှိခြင်းရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဖိုဟော်မုန်းစစ်ဆေးခြင်း – တကယ်လို့ မျက်နှာမှာ အမွှေးအမျှင်တွေထူလာမယ်၊ အသံတွေပြောင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်က သွေးတွင်းအဖိုဟော်မုန်းစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
လက္ခဏာတွေနဲ့ သွေးအဖြေတွေပေါ်မူတည်ပြီး ပုံရိပ်ရိုက်ကူးစစ်ဆေးမှုတစ်မျိုး သို့ တစ်မျိုးထက်ပိုပြီးလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့-
အာထရာဆောင်း – အသံလှိုင်းများကိုသုံးကာ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုစစ်ဆေးသည့်နည်းဖြစ်ပြီး တစ်ကြိမ်မှရာသီမလာဖူးသေးပါက ကိုယ်တွင်းမျိုးပွားအင်္ဂါများကောင်းမကောင်း အာထရာဆောင်းသုံးပြီး စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
စီတီစကင် – ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို အဘက်ဘက်မှ ပုံရိပ်ရိုက်ယူပြီး ပုံဖော်ကြည့်ရှုသောနည်းဖြစ်တယ်။ သားအိမ်၊ သားဥအိမ်၊ ကျောက်ကပ်တို့ ပုံမှန်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အမ်အာအိုင် – ရေဒီယိုသံလိုက်လှိုင်းများကိုသုံးကာ ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းရှိ တစ်သျှူးများရဲ့ပုံရိပ်များကို အသေးစိတ်ရိုက်ကူးသောနည်းဖြစ်တယ်။ pituitary ဂလင်းမှာ အကျိတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ရိုက်ကူးကောင်းရိုက်ကူးရပါလိမ့်မယ်။
Late Period (ရာသီမမှန်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုကတော့ ရာသီပျောက်စေသော အကြောင်းအရင်းပေါ်မူတည်နိုင်တယ်။ တချို့အခြေအနေတွေမှာ သန္ဓြေတားဆေး၊ ဟော်မုန်းကုသမှု စသည်တို့နဲ့ ရာသီစက်ဝန်းပြန်စအောင် လုပ်နိုင်ပြီး သိုင်းရွိုက် သို့ pituitary ဂလင်းကြောင့်ဖြစ်ပါက ဆေးကုသဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ အကျိတ် သို့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပါက ခွဲစိတ်ကုသရန် လိုကောင်းလိုနိုင်ပါတယ်။
တချို့သောနေထိုင်မှုပုံစံတွေ- ဥပမာ- လေ့ကျင့်ခန်းအလုပ်များခြင်း၊ အစားနည်းခြင်းတွေကြောင့် ရာသီပျောက်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် လှုပ်ရှားမှုပုံမှန်သာလုပ်ပြီး အနားယူဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေကိုလည်းလျှော့ချပါ။ မိမိဖာသာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေမလျှော့နိုင်ပါက မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဆရာဝန်ကိုတိုင်ပင်အကူအညီတောင်းပါ။
http://www.healthline.com/health/womens-health/why-is-my-period-late . Accessed November 18, 2016.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/amenorrhea/basics/definition/con-20031561?reDate=17112016 .Accessed November 18, 2016.
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenorrhoea . Accessed November 18, 2016.